isivuno high ngesakhiwo incike ukunakekelwa kahle izitshalo, okuyinto, njengabantu, bayagula. ejenti Antifungal zenzelwe ulwe ezihlukahlukene nezifo. Ezimakethe Russian umuthi omusha "noHorus" - isicelo fungicide kungenzeka kwabaningi izithelo izitshalo.
Lokhu kusho uhlelo Isidakamizwa lokuqala, okuyothi ngalo zokuvimbela okuhlangene kanye nokwelashwa eziningi izifo zezitshalo.
Kuyaziwa ukuthi lesi sidakamizwa "Chorus" - inhlukano fungicide uchaza umphumela wawo translaminar letindzala noma wendawo, okuyinto ngenxa insolubility yayo emanzini. Ukubhekana nalesisimo, izidakamizwa akakwazi zasakazekela isitshalo, kanye juice. Nokho, kungaba zingene amahlamvu abasha noma izithelo isikhala intercellular, futhi umsebenzi isikhathi eside kusuka ngaphakathi ukuvimbela.
umphumela Translaminar kubuye kusimo ekulungisweni isithako esebenzayo Slaubaugh bakwazi ukungena amahlamvu abavuthiwe, ikakhulukazi nge cuticles obukhulu. Ngakho-ke kuyindlela yokuthola "noHorus" (a fungicide) imfundo manual uncoma ukusebenzisa izitshalo abasha ekuqaleni yokukhula.
Ukungena ketshezi asebenzayo kumaseli ishidi kwenzeka ngemva kwamahora ambalwa ngemuva kwezulu is ongeke uqedwe imithi. A ukwazi fungicide ukusebenza ngisho ezingeni lokushisa aphansi. Lapho kufuthwa ngasekupheleni, ngaphambi nje kokuvuna, kukhona neutralization of izithelo ezingathuthukisa ikhono isitoreji yabo futhi ukunciphisa ukulahleka kusuka bola ngo-40%.
Inkampani Swiss "Syngenta" kubhekwa omunye abaholi bezwe ukuqaliswa izindlela ukuvikela izitshalo yizifo ezihlukahlukene, yena unjiniyela "Chorus" zomuthi. umakhi Fungicide ukhiqiza ngesimo granules bahlakazeka. amaphakethe Prepacked e 1 g, 3 g, 15 g-1 kg.
Incazelo isithako esebenzayo
Isithako asebenzayo we agent fungicidal kuyinto cyprodinil. iqembu Chemical kubhekwa anilinopyrimidine kwakwakhe.
Inani 750 g cyprodinil kwelinye kg zomuthi "Chorus" (fungicide). Imiyalelo isithako kungokwalabo ekilasini lesithathu ubuthi ngokusho WHO ngezigaba.
Kuyinto zinambuzane yesimanje, umuthi okuhloswe ngaso ukulawula eziyingozi imvelaphi fungal, iningi njengoba isilinganiso izifo. Ingqikithi kuvimbela biosynthesis i acid acid okukhuthaza ukuphazamiseka ngibone umjikelezo wokuphila kwe lwegciwane ngesikhathi mycelium ukukhula ngesikhathi sokubeletha emangqamuzaneni isitshalo. Isici esibalulekile salo ukulungiswa kuyinto umphumela wawo isikhunta pathogenic ubusika isinyathelo amakilasi Ascomycetes, Deuteromycetes futhi abanye Bazidomitsetov.
Cyprodinil kuvimbela ukuhluma kwezinhlobo hyphae fungal ezicutshini amahlamvu abasha kuphela, okwenza zilinganiselwe izinhlobo elisetshenziswa izitshalo omdala. yisithombo iwukudambisa kabi itheleleke akunakwenzeka ukuba lokhu fungicide.
Ukulungiselela "Chorus" (fungicide) imfundo manual uncoma ukusebenzisa lapho monilianolnom ashise itshe izihlahla zezithelo, okuhlanganisa cherry, amabhilikosi, plums, iplamu kanye peach.
Ngempumelelo nge cherry leaf indawo, klyasterosporioze, uqweqwe, powdery isikhutha, izithelo ukubola, abacaphuni leaf izindwani, grey isikhunta, powdery isikhutha, downy isikhutha, indawo elimhlophe kanye ensundu, ompunga isikhunta, leaf indawo.
Izidakamizwa "Chorus" (fungicide) Isicelo User uncoma ukucubungula izinhlobo ezehlukene amagilebhisi, ama-strawberry, ama-sitrobheli, wavuka notshani utshani utshani.
izincomo ajwayelekile ukusetshenziswa
Ukuze ukulungiselela "noHorus" (a fungicide) Umhlahlandlela inikeza isiqondiso phezu ukulungiselela lesifanele yesixazululo, nokucubungula izitshalo. Ukuze sishaye izihlahla enikeziwe umqhele ngezigaba ezimbili. Ukwelapha yokuqala yenziwa phambi zezimbali, kwesibili - esikhathini ezikhulayo ngemva izimbali, kodwa amasonto kungakadluli 2 ngaphambi yokuvuthwa.
Ukulungisa isixazululo ukusebenza, wasebenzisa 3-3.5 g we fungicide, okuyinto buhlanjululwe 10 amalitha amanzi. Ngakho ivolumu ingxube zingelashwa itshalwe nge eziyikhulu. Inombolo eyodwa isixazululo umuthi kusuka 2 kuya ku 4 amalitha, kodwa kufanele ucabangele ubukhulu nohlobo lomuthi umqhele wafutha kudivayisi.
processing plant Kwenziwa, lapho elomile windless, ne sezulu esihle. Ukuze isenzo omkhulu wayezohamba ngokulinganayo oswakanyiswe isixazululo of bonke izindwani leaf. Ngokuqondene ukuxuba izidakamizwa nezinye imithi yokubulala izinambuzane "noHorus" (a fungicide), ochwepheshe zangempela ukhombe kwedivayisi ezinhle, kodwa kufanele wenze isheke wokulungiselela, funa kube khona ukusabela zamakhemikhali.
Ngokuvamile, amanzi is batheleka lokuqala sishaye izindlela isitsha bese icala fungicide asebenzayo, balandela wathela nezinye izinto. Lapho isembozo amaphakethe amanzi-encibilikayo eziphonsa yabo yokuqala emanzini, futhi kuphela bese ugcwalisa i fungicide. Ngemva sishaye ukucutshungulwa ezenziwe ugeziwe ngamanzi acwebileyo.
Isici ukusetshenziswa ithuluzi sisezinsukwini zaso ephumelela kunazo kubanda, emazingeni okushisa kusuka +3 ukuba + 10 ° C ukushisa. Lapho izinga lokushisa udlula + 22 ° C, alikukhuthazi kucutshungulwa izitshalo ukulungiselela "Chorus" (fungicide) yokusetshenziswa. Izibuyekezo horticultural ukuqinisekisa inzuzo yayo njengoba kuqhathaniswa nezinye izindlela okuyinto tingasebenti ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi. Ngenxa yalesi impahla isetshenziswa fungicide ngasekuqaleni kwentwasahlobo ngesikhathi esiphelweni monilioznoy nezinye isifo izihlahla zezithelo ngetshe noma pome.
Isikhathi Ukuvikelwa isuka kuzinsuku 7 kuya ku-10. Ibhukwana liphinda futhi uthi izidakamizwa uyakwazi kunethonya nomphumela oqabulayo phezu izitshalo itheleleke. Ukuze kusebenzeke ukusetshenziswa ngokwengeziwe nezinye nesikhunta okuyizinto aphumelele sezulu efudumele, njengokuthi "Ijubane."
Isikhathi phakathi yokuvuna isivuno zakamuva sishaye nesikhunta uma ileveli indlela ayisebenzisayo kuyehla kube nemingcele ephephile, elahlukile isitshalo ngasinye. Nge strawberry futhi amagilebhisi kungaba ukukha amajikijolo ngemva kwezinsuku ezingu-7, ngetshe futhi izithelo pome kuvuna kuphela ngemuva kwezinsuku ezingu-30.
Umuthi akunamthelela anobuthi ku izinyosi nezinye izinambuzane ezihlala kusayithi. It is wafakazela ukuthi nge okwandisa amazinga fungicide kabili khona sobala nemiphumela emibi izitshalo.
Izinsalela "noHorus" isixazululo ukusebenza ngeke agcinwe, kufanele ilahlwe. Uma iphakethe umkhiqizo ayivulwanga, kungaba igcinwe okushisa kusuka -10 ° C kuya + 35 ° C.
Izitshalo iphathwa nokuvimbela powdery isikhutha nezinye izifo fungal zinambuzane ahlukahlukene. izidakamizwa Ngokuvamile kwenziwa "noHorus-fungicide" ukucutshungulwa rose phambi efihlekile nokumisa kuma lokushisa ka + 10 ° C. Isixazululo ibhalwe 10 amalitha amanzi.
Ngemuva kwalokhu zisebenzisa inhlanganisela nesikhunta eziningana. Ngezinhloso oqabulayo nezihlahla zom kuthiwa wafutha nenye izidakamizwa, "Chorus" futhi "Akhtar".
Kusukela isikhutha imiphumela emihle etholakala ngokuzikhandla ukucutshungulwa ngesikhathi esisodwa rose izidakamizwa eziningi, okuhlanganisa nesikhunta "noHorus" futhi "Akhtar", amaminerali chelated, imithi "ingcina." Zonke lezi izidakamizwa ndawonye buhlanjululwe ukuba 10 amalitha amanzi. Sishaye kufanele kwenziwe kusihlwa.
Ukucubungula izihlahla zezithelo
Ngo izilonda klasterosporiozom izithombo noma cherry leaf indawo peach, iplamu, ibhilikotsi, cherry, cherry yokwelapha yokuqala izidakamizwa "Chorus" lwenziwa yokukhula, futhi sishaye okwalandela kwenziwa ngemva kwezinsuku ezingu-10. Ngo ekucubunguleni izitshalo zidinga eziyikhulu namashumi 3.5 g ngalinye 10 amalitha amanzi.
Icubungula kusho "noHorus-fungicide" zamapetshisi, cherry, ibhilikotsi zamakhiwane nezinye izihlahla zezithelo ngetshe monilial ushise. Kusukela izimpawu zokuqala ukutheleleka ngesikhathi yokukhula ukukhiqiza yokwelapha yokuqala izidakamizwa futhi sishaye okwalandela isebenze ngemva kwezinsuku ezingu-14. Uma ukucubungula kudinga eziyikhulu izitshalo kusuka 2 kuya 3.5 g ngalinye 10 amalitha amanzi.
Uma kwakuba khona itshe izitshalo nezithelo abolele yokukhula kukhicite yokwelapha yokuqala nge fungicide, futhi sishaye yesibili Kwenziwa amasonto amabili ngaphambi kokuvuna. Ngo ekucubunguleni izitshalo zidinga eziyikhulu namashumi 3.5 g ngalinye 10 amalitha amanzi.
Lapho ku pome izihlahla zezithelo (eliphakathi kwe kanye apula), uqweqwe, Alternaria, moniliosis noma isikhutha ngenkathi kuqala ezikhulayo iveza sishaye imiqhele izihlahla esigabeni of the Isigaxa oluhlaza noma ekupheleni izimbali. Post-ukucutshungulwa wenziwa emva kwezinsuku 10. Uma ukucubungula kudinga eziyikhulu izitshalo 2 g ngalinye 10 amalitha amanzi.
Inani isixazululo ukusebenza, okuyinto ngezikweletu 100 m 2, ka 10 amalitha. abasebenzi Phuma ezindaweni baphathwe nesikhunta, ngoba imisebenzi yezandla ezihambisana wokunakekela izitshalo, kufanele kuvunyelwe kuphela emva kwezinsuku 7. Ukuze afeze imisebenzi mechanical esanele ulinde izinsuku 3.
Ukucubungula itshe futhi izithelo pome izitshalo ezindaweni ezinkulu eyenziwa ugandaganda sprayers. Oku-yokulinganisa nemishini edingekayo ukuze sishaye ngaphambi kokusetshenziswa, unikezwa ukuthi lingakanani ijubane lokuya wafutha isixazululo kudivayisi yokudla, ukusatshalaliswa iyunifomu yesixazululo zokusebenza. Kwakukhona umfudlana emoyeni iqondiswa ezilimweni kwamasiko usebenzisa valve mpintsha.
ukwelashwa isihlahla Kwenziwa nhlangothi zombili, esehlanganise lonke umqhele. Umthamo isixazululo ukusebenza esetshenziswa incike ubukhulu isihlahla futhi ivela amalitha ehektheleni 400 kuya 9000. Kungenzeka ukusebenzisa izingcezu kokuba eziyize Isigaxa spray nokuhlunga ezifanele. Umfutho womoya kuhluka 2 kuya 5 ibha.
strawberry kanye sitrobheli ukucutshungulwa
Lezi zitshalo singangena kule yizifo ngokucindezela grey isikhunta, powdery isikhutha, omhlophe kanye indawo brown. Umthombo oyinhloko lengculaza izinsalela izitshalo onesifo, osale ngonyaka odlule. Yingakho kubalulekile ukuba nokwelashwa kokusetshenziswa kwezidakamizwa "noHorus" (a fungicide) strawberry noma strawberry.
Ngo ezahlukene izimila nezikhathi usebenzisa lokuhlala ezahlukene isixazululo ukusebenza. Ukuze kusebenzeke ngaphambi zom nezihlahla noma ngemuva lokuqoqa amajikijolo zisebenzisa isixazululo. It ibhalwe kanje: 6 g fungicide ngalinye 10 amalitha amanzi. Phakathi kumiswa emakamu esibelethweni yesixazululo yehliselwa ngesigamu, okuyiwona 3 g mkhiqizo ziyoncibilika 10 amalitha amanzi. okuholela Ukusetshenziswa ketshezi 5 amalitha ngamunye yikhulu.
Impatho enjalo ngaphambi nangemva kwenkathi izimbali uyobavikela sezihlahla strawberry kusukela Amagciwane abangela powdery isikhutha, omhlophe leaf indawo, grey bola amajikijolo.
Futhi, izidakamizwa ingasetshenziswa kanye nezinye zinambuzane. Ngokuba nokuvimbela izifo fungal futhi isivikelo izinambuzane (Weevil, leaf beetle) sisebenzise fungicide inhlanganisela "Chorus" e isamba 0.7 kg kanye zinambuzane "aktellik 500" emqulwini ka 0.6 amalitha ngamunye izitshalo ehektheleni.
Ukusebenza kahle okusezingeni eliphezulu inikeza ekwakhiweni ngokumelene grey isikhunta sitrobheli. Sokusabalalisa Ukungena ukutheleleka kwenzeka ngesikhathi izimbali. Ukwandisa inani lezinhlamvu fungal emoyeni siyenzeka ngasekuqaleni efihlekile ukuvulwa, kodwa iningi lazo zitholakala ekupheleni fruiting. Lokhu kwelashwa ukhuthaza izidakamizwa «noHorus" (a fungicide) yokusetshenziswa. Izibuyekezo abalimi ukukhombisa ukusebenza kwe isifutho zokuvimbela ngaphambi nangemva zom isikhathi. Zinambuzane uyakwazi ukunikeza nomphumela oqabulayo izinsuku eyodwa nengxenye emva kokutheleleka.
Against isikhutha, gray isikhunta nangesikhunta, ukusebenzisa umshadisi ogunyazwe zokuzivikela "noHorus" (a fungicide). Iziyalezo ukulungiswa yamagilebhisi kuhlanganisa ukugeleza rate, okuyinto 6 g ngalinye 5 amalitha amanzi, ngesilinganiso isixazululo ogama value oluhambisana 2 amalitha angamakhulu ngayinye ukusebenza.
Phakathi yokukhula, futhi intsha amahlamvu umvini ziphathwa ngezigaba ezintathu ngezikhathi ezahlukahlukene isizini. Okokuqala sishaye izidakamizwa "Chorus" (fungicide) emagilebhisini Kwenziwa ngesikhathi kumiswa efihlekile futhi ngaphambi izimbali, owesibili isikhathi ukuphathwa akhawunti for kumiswa Amahlukuzo amajikijolo, futhi ukuziphatha lwesithathu phakathi yokuvuthwa kanye Umbala izithelo.
Umbono balimi kanye nezifundiswa
Uma usebenzisa okokuqala lesi sidakamizwa "noHorus" (a fungicide) ungezwa ezihlukahlukene izimpendulo. Ngokuvamile, lapho isenzo esihle kusho abatshali sebeqala ukweluleka ke abangane babo ngokwethukela. Endabeni kahle ongaphakeme ku fungicide okwengeziwe alisetshenziswa, futhi esikhundleni salo omunye izidakamizwa yesimanje.
Imiphumela emihle etholakala ngokuzikhandla sishaye indawo sitrobheli white kanye brown izindlela zokuzivikela "noHorus" (a fungicide). Izibuyekezo abonisa izitshalo ukwelashwa okuphumelelayo abumane izindawo amaqabunga abasha, oluhlaza isihlahla siqala futhi eqala ukubukeka enempilo. Umuthi kuwusizo ngokwanele ukuncibilikisa okuqukethwe sachet emanzini, uhlanganise kahle futhi uthele sprayer ethangini.
Ukusebenza kahle okusezingeni eliphezulu kubonakala sezulu cool manzi, okungukuthi esebenzisa "Chorus" (fungicide). Izibuyekezo abashayeli bamaloli ukuqinisekisa umphumela wawo ezingeni lokushisa + 3 ° C entwasahlobo yonyaka, futhi isenzo siba lubonakale ngemva kwamahora ambalwa.
Uma kusetshenziswe kahle, akukho ukuluthwa microflora pathogenic ukuze cyprodinil, okuyinto ingxenye fungicide. Abalimi like iqiniso lokuthi izidakamizwa is hhayi wageza off by imvula, okuyinto inzuzo yokusebenzisa ke.
Esinye isici esibalulekile kwaba ukuntuleka phytotoxicity ukunikeza izithelo eco-friendly emva kokwelashwa, kuphela ngaphansi isimo ukugcinwa imithetho yokuphepha. Veza ukuthi izidakamizwa ayiyona ingozi izinyosi, kodwa ingozi lokudoba.
Ubulula kungenxa kwedivayisi yayo obuhle imithi yokubulala izinambuzane eziningi, iqinisekisa umphumela engcono ikhono lokusebenzisa hhayi kuphela ezifweni fungal, kodwa futhi ngenxa yokuchitheka izinambuzane eziyingozi.
Ububi umphumela abampofu fungicide nezifo ezithathelwana eqinile zezitshalo avuthiwe, okuyinto ezimweni eziningi asivumi ungagcina.
Honeysuckle Silginka: incazelo grade nezithombe
Primrose Imbewu: Izici zokukhula
Inyama grinder Braun G3000: Ukubuyekeza, isithombe, ukubuyekezwa
Ungathanda ubhalisele isigaba ukuphotha? Thola ukuthi ulindelwe ngesikhathi Amazing ngowokuqala!
Troparion the Virgin oNgcwele nomkhosi, ngemva kwalokho-ke uyabulawa